အဘယ်ကြောင့်စကျင်ကျောက် tile ကိုအဘယ်ကြောင့်အကြောင်းပြချက် ကြမ်းပြင်များအတွက်အကောင်းဆုံး option ကိုဖြစ်ပါတယ်
နှစ်များတစ်လျှောက်စကျင်ကျောက်ကြွများများသည်လူကြိုက်များလာပြီးလူနေအိမ်ရာအများအပြားနှင့်စီးပွားဖြစ် interiors များနှင့်ပြင်ပတွင်အသုံးပြုနေပြီး၎င်းသည်အလွန်အလိုက်အသင့်ပြင်ဆင်ထားနိုင်ပြီးတစ်ချိန်ကအလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်သည်။. အလွန်အမင်းတာရှည်ခံမှုနှင့်သဘာဝအလှအပဖြစ်သောကြောင့်အဖြူရောင်စကျင်ကျကျောက်ပြားသည်မြေကြီးမှကြောက်စရာကောင်းသောသဘာဝကျောက်တုံးများ, ထို့အပြင်စကျင်ကျောက်ကြွေပြားများသည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီးတပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်မဟုတ်ဘဲပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်အနည်းငယ်သာလိုအပ်သည်. အခြားသဘာဝကြွေပြားများနှင့်မတူဘဲစကျင်ကျောက်ဆောင်များသည်ဝိုင်, လက်ဖက်ရည်နှင့်ဆိုဒါစသည့်အက်ဆစ်အတ္တင့်များမှပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကိုတွန်းလှန်ပါ။ ထို့အပြင်သင်ကစကျင်ကျောက်ပြားများကိုကမ်းလှမ်းသောကြွေပိုးများထုတ်လုပ်သူများပါ0င်သည့် Plethora ကိုသင်တွေ့နိုင်သည်.
စကျင်ကျောက်ခံများ၏အဓိကအကျိုးကျေးဇူးများအနက်တစ်ခုမှာ၎င်းသည်အလွန်အမင်းအကြမ်းခံမှုဖြစ်သည်. ကြမ်းပြင်များအရစားစားကြွေပြားများသည်အသက်ရှည်ပြီးသစ်သား, ကြွေထည်ကြသောကြွေပြားသို့မဟုတ် linoleum ထက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနည်းပါးသည်. slate ကြွေပြားများသည်ခြစ်ရာများကိုခံနိုင်ရည်ရှိရုံသာမကအစွန်းအထင်းများနှင့်လည်းသက်ဆိုင်သည်.
အလွန်အမင်းတာရှည်ခံဖြစ်ခြင်းအပြင်စားစကျင်ကျောက်သည်လမ်းလျှောက်ရန်အလွန်ကြီးစွာသောပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဖြတ်. လမ်းလျှောက်ရန်အဆင်ပြေသောချောမွေ့သော texture ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်. အခြားသဘာဝကျောက်တုံးများနှင့်မတူဘဲ,.
စကျင်ကျောက်ဆောင်များနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနည်းသည်။ စကျင်ကျောက်သည်အလွန်နိမ့်သောနိမ့်ကျသောနှုန်းရှိသောသဘာဝကျောက်ဖြစ်သည်. ထို့အပြင်၎င်းသည်အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှ၎င်း၏တောက်ပမှုနှင့် texture ကိုမဆုံးရှုံးပါ. သင်လုပ်ရန်လိုအပ်သမျှသည်သန့်ရှင်း။ ပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းတို့ကိုပုံမှန်သုတ်ကြသည်။.
ဤကြာရှည်ခံပြီးလှပသောပစ္စည်းသည်မည်သည့်အခန်းမဆိုအကျိုးပြုနိုင်သော်လည်းစကျင်ကျောက်အကန့်အသတ်ဖြင့်ပင်ဂုဏ်သတ္တိများသည်အချို့သောလုပ်ဆောင်ချက်များအတွက်အထူးကောင်းမွန်သည်. မစောက်ခြင်းသာမကအစွန်းအထင်းခြင်း, ရေစိုခံဂုဏ်သတ္တိများသည်ရေချိုးခန်းနှင့်အပြင်ဘက်ဟင်းလင်းပြင်များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်. ကျောက်တုံးထဲသို့ရေမ0င်နိုင်သည့်အတွက်စကျင်ကျောက်သည်အေးခဲမည်မဟုတ်,.
မည်သည့်ဒီဇိုင်းနှင့်အိမ်၏အရောင်အစီအစဉ်ကိုမဆိုသင်ကြည့်ရှုနိုင်သည့်စကျင်ကျောက်ကြမ်းပြင်အတွက်နေရာတစ်ခုရှာတွေ့နိုင်သည်. ထို့အပြင်သင်စကျင်ကျောက်မှောက်များကိုကမ်းလှမ်းသောစကျင်ကျောက်ထုတ်လုပ်သူနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းကုမ္ပဏီများ၏ဗက်ဖာကိုသင်တွေ့နိုင်သည်. မပြုပြင်ထိန်းသိမ်းထားခြင်းနှင့်လုံးဝမပြုပြင်ပါ။ ရွေးချယ်ရန်အတွက်အမျိုးမျိုးသောအရောင်များနှင့်ပုံစံမျိုးစုံအမျိုးမျိုး, စကျင်ကျောက်သည်အနည်းဆုံးစျေးကြီးပြီးကျေနပ်ရောင့်ရဲသော tile ရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်.